Ahoana no hanatsarana ny tranokalako ho an'ny SEO iraisam-pirenena?
Amin'izao fotoana izao, ny tontolo dizitaly maoderina ao amin'ny tranonkala dia lasa mihamaro hatrany. Manomboka any amin'ny Vondrona Eoropeana izay voarakotry ny fidirana amin'ny aterineto mihoatra ny 80%, ho an'ireo sasany any amin'ny fanjakana somary mandroso kokoa amin'ny 90% amin'ny faritany. Ny tarehimarika marina dia mety haharesy lahatra bebe kokoa kokoa an'i Shina miaraka amin'ny mpisera maherin'ny 731 tapitrisa, na dia ny antsasaky ny tombanana ho an'ny mponina aza. Eny, ny aterineto dia manolotra ny antokom-pifandraisana maro ho an'ireo tompona tranokala mazoto mitodika any amin'ireo sisintany, tsy misy sakana ara-kolontsaina. Na izany aza, ny mpandraharaha amin'ny aterineto dia tokony hanana fahatakarana malalaka ny mpanjifa samihafa mila manome azy ireo ny vokatra na tolotra faran'izay ilaina.
Ankoatra izany, ny fananganana votoaty mifanaraka amin'izany dia lasa resaka tokony hodinihina - giochi per bambini sicuri. Amin'ny ankapobeny dia mety hieritreritra ianao fa ny SEO iraisam-pirenena dia midika fotsiny hoe manana votoaty tokana tonga amin'ny teny anglisy amin'ny teny anglisy. Saingy ny toe-javatra dia tsy mora tahaka ny mety amin'ny voalohany. Ny zava-misy dia ny fampiasana ireo fitsipika fototry ny SEO iraisam-pirenena dia midika hoe mitadidy sy mampiasa tsara ireo teknika samihafa momba ny fisoratana sy ny toerana misy azy, miaraka amin'ny lafiny ara-teknika amin'ny fikarakarana fikarohana. Ankoatra izany, raha jerena ny tetik'asa ara-barotra maneran-tany, ny fikarakarana ny SEO iraisana iraisam-pirenena amin'ny sehatra feno dia mety ho lasa asa feno sy maharitra. Eto ambany eto dia hahita fijery fohy momba ireo tetik'asa fototra ho anao hahazoanao hery avy amin'ny SEO iraisam-pirenena mahomby, ary hampitombo ny fahafaha-miditra ara-barotra eo amin'ny tetikasa rehetra amin'ny aterineto.
Mamolavola ny fangataham-pandraharana manokana isam-paritra
Raha mieritreritra maneran-tany ianao, dia ho hitanao fa na dia i Google aza dia manana karazana votoaty samihafa sy aseho isan-karazany hita ao amin'ny pejin-tranonkalan'ny karoka (SERP) ho an'ny firenena tsirairay. Midika izany fa ny fanontanian'ny sokajy tsirairay dia mety hitondra valiny hafa avy amin'ny firenena mankany amin'ny firenena. Raha ny marina dia manana ny SERP napetraky ny tombontsoam-paritra i Google ary manao izay tsara indrindra hanarahana ny fironana eo an-toerana indrindra amin'ny traikefa mpampiasa kokoa any amin'ny firenena rehetra. Raha ny teny sy ny tahan'ny fifamoivoizana, amin'ny fepetra voafaritra amin'ny fiteny samihafa sy voambolana local. Ny ampahany manan-danja amin'ny teny fanalahidy amin'ny ankapobeny dia mety tsy ho afaka handika ny dikanteny ampy fotsiny. Tokony ho raisina ho laharam-pahamehana amin'ny voalohany izany, mazava ho azy ny fiheverana ny mponina eo an-toerana, ny tombontsoa ara-kolontsaina, ary ny maro hafa manokana mbola tsy mazava tsara na dia ireo mpandinika indrindra amin'ny webmaster aza. Midika izany fa ny firenena samihafa dia mety manana fanantenana tsy manam-paharoa, na dia ao anatin'ny orinasa iray ihany aza. Tsy lazaina intsony ny marika iraisam-pirenena, indrindra raha manondro ny zavatra tena tadiavin'ny olona alohan'ny hahatongavan'ny fanapahan-kevitry ny mpividy.
Ampitomboinao ny paikady ho an'ny SEO
Voalohany indrindra, ny famolavolana tetik'ady SEO iraisam-pirenena, aleo raisina ho toy ny mahazatra - miorina tsara amin'ny teny fototra iray, ohatra ao Shina, tsy midika ny vokatra tsara tarehy any an-kafa any ivelany. Vokatr'izany dia tsy maintsy manomboka amin'ny fanatsarana ny SEO eo an-toerana ianao, manomboka ny famoronana votoaty ho an'ny mpanatrika izay nofantenanao tao amin'ny firenena tokana. Raha manao izany ianao, dia ho takatrao ny fivoaran'ny faritra eo amin'ny faritra ho an'ny fifamoivoizana, ary koa ireo zavatra miavaka amin'ny teny manan-danja indrindra. Ankoatra izany, tsy maintsy ampiharina amin'ny lafiny ara-teknika sasany amin'ny SEO ianao na amin'ny ambaratonga ambony kokoa. Midika izany fa mila mametraka ny pejy web anao amin'ny hreflang tags ianao.
Amin'ny ankapobeny, ny marika hreflang dia ny ampahany amin'ny code ampiasain'ny Google mba hamantarana ny firenena tariby, ary noho izany, ny fiteny ho an'ny votoatin'ny tranonkala. Izany dia hanampy anao ho azo antoka fa ny votoaty tsara dia hita ao amin'ny faritra mety. Ohatra, na dia eo amin'ny teny Espaniôla aza, dia misy ireo vokatra manokana amin'ny voambolana rehefa manamboatra ny votoatiny ho an'i Espaina manokana, ary ohatra amin'ny fampisehoana azy ho an'ireo mpampiasa Arzantina. Ny fampiasana ny hreflang tags dia manome hery ny votoatinao amin'ny alalan'ny tsaratsara kokoa ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny fampidirana bebe kokoa ny asa soranao.
Amin'izay fotoana izay ihany, mampiasa ny hreflang tags dia manampy amin'ny fampihenana ny mety ho fandrahonana amin'ny votoaty dika mitovy, amin'ny filazan'i Google fa ny votoaty manokana dia nosoratana ho an'ny mpihaino maro samihafa amin'ny tanjona. Ny fanombohana amin'ny fanamarihana ny votoatiny dia manoro aho hampiasa ny format ISO 639-1 ho an'ny fiteny tsirairay, mifanaraka amin'ny fananana ny sitemaps rehetra izay tsy tonga dia mihoatra ny 10,000 URLs, na ny fametrahana azy ireo hozaraina maromaro. Ireto ambany ireto ny tetikasa 3 fototra ahazoana antoka fa ny votoatin'ny tranokala hreflang dia midika hoe:
Maka ny HTTP Header miaraka amin'ny hreflang tag mba hahazoana antoka fa tonga amin'ny pejy web izany
Ny tranokala napetrakao amin'ny hreflang tags
Alao ny pejin'ny tranonkala ho marihina miaraka amin'ny marika
Mianara mivantana ary miray saina
Ndeha ho raisintsika ho azo antoka - ny fametrahana localisation ho an'ny SEO iraisam-pirenena dia tsy midika hoe fandikan-teny tsotra ho an'ny tranonkala manokana. Tokony hiatrika izany isika - ny fananganana tahirim-pahamendrehana azo antoka dia midika fa mamorona votoatin'ny lahatsoratra izay mety kokoa amin'ny tombotsoan'ny mponina eo an-toerana sy ny fironana fikarohana. Midika izany fa tsy maintsy mikarakara fikarohana fototra ho an'ny firenena tsirairay izay tadiavinao ianao. E. h. , raha toa ianao handefa toerana maro amin'ny orinasanao, dia manoro hevitra aho fa manana pejy fanentanana samihafa ary, mazava ho azy, ny votoaty samihafa ho azy ireo, mba hahitana ny fahitana tsara kokoa ao an-toerana, ary koa ny pejy findramam-pikarohana feno.
Aza misalasala manararaotra ny fotoana sy ny ezaka ataonao mba hanangonanao ny tetikasam-panatontosana iraisam-pirenena, eo an-toerana sy amin'ny findainao ho an'ny tetikady SEO iraisam-pirenena mahomby. Manolotra soso-kevitra ny hanao lisitry ny laharam-pahamehana aho, manomboka amin'ireo firenena izay mety hanomezana mpanjifa maro kokoa izay tadiavinao ao amin'ny tsenanao. Ohatra, raha mikendry ny mpiserasera Shinoa ianao, dia tsara kokoa ny mihevitra fa mihoatra ny 95% amin'ireo mpampiasa aterineto ao an-toerana no mijery an-tserasera amin'ny alalan'ny fitaovana portable. Izany no mahatonga ireo marika te-handresy ny fifaninanana dia tokony hanana ny votoatiny tsara ho azy ireo mikasika ny faharetan'ny finday.
Farany, aza adino mihitsy ny mandrefy ny valin'ny tetikady SEO iraisam-pirenena amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny fepetra misy anao amin'izao fotoana izao. Manaova fanaraha-maso indroa ho an'ireo metimety rehetra ao amin'ny faritra voatokana rehetra araka izay azo atao. Tadidio foana ny manara-maso ny toerana misy anao, ary koa ny manome toky fa ny tranonkala dia mamaritra tsara ho an'ny firenena na faritra tsirairay. Na izany na tsy izany, aza mahatsiaro ho saro-tahotra ny hampiasana hery goavana amin'ny PPC mba hanitarana ny tsena vaovao. Ny fampiasana tsara ny PPC ao amin'ny tetik'ady SEO manerantany dia hanampy anao hahazo fahatakarana tsara kokoa momba ny fihetsika ao an-toerana, ny fivoaran'ny fiovam-po, ary ny fanatsarana ny làlan-kizorana ao amin'ny firenena vaovao.